लियो ३२५ बि वान को यो वर्ष पहिलो परिषद बैठक कात्तिक १२ र १३ गते गोरखामा हुँदै - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:२०
लियो क्लव अफ गोरखाको आथित्यतामा लियो जिल्ला परिषद ३२५ बि वान नेपालको पहिलो परिषद बैठक एवं पुरस्कार बितरण समारोह गोरखामा हुने भएको छ । कात्तिक १२ र १३ गते गोरखा सदरमुकामको हरमटारी स्थित होटल मिराकलमा बैठक हुने लियो क्लव अफ गोरखाले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
परिषदमा सहभागी हुन काठमाण्डौँ, धादीङ, नुवाकोट, पोखरा लगायत बिभिन्न जिल्लाका एक सय १९ वटा क्लवका सदस्यहरु सहभागी हुने लियो क्लव गोरखाका प्रथम उपाध्यक्ष बालकृष्ण परियारले बताए । उक्त परिषद बैठक सहितको कार्यक्र सम्पन्न गर्न छ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । तीन लाख ४० हजार लियो क्लव र सदस्यहरुबाट जुट्नेछ भने बाँकी रकम बिभिन्न संघ संस्था, निकाय सँग सहयोग खोजिने उपाध्यक्ष परियारले बताए ।
सोही अवसरमा वर्ष २०२०÷२१ मा संचालन भएको गतिविधिको पुरस्कार बितरण, गोरखा जिल्लाको दशैँ जिल्ला पदस्थापन पनि हुने लियो क्लव अफ गोरखाका अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले बताए । बिभिन्न क्लवबाट सहभागी लियो सदस्य र आथिति सहित गोरखामा चार देखि पाँच सय मानिस उक्त कार्यक्रमका लागि भेला हुने क्लवले जनाएको छ । ‘गोरखाको पर्यटकिय स्थलको प्रचार प्रसार र आन्तरिक पर्यटक प्रर्वद्धनका लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम गोरखामा राख्न माग गरेका हौँ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
पहिलो दिन कात्तिक १२ गते पञ्चेबाजा र ¥याली सहित गोरखा बजार परिक्रमा र १३ गते परिषद बैठक हुने कार्यक्रमका संयोजक समेत रहेका बालकृष्ण परियारले बताए । ‘अहिले सम्म ५० प्रतिशत तयारी पुरा भएको छ’ उनले भने ।
लियो क्लव अफ गोरखाले सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि समाजसेवा रहेको क्लवले जनाएको छ ।